Halatra gazoala an’ny JIRAMA Olona efatra indray no tratra tany Nosy Be
« Jerrican» mavo miisa 13 feno gazoala indray no tratra tao amin'ny tobim-pamokarana herinaratry ny Jirama Nosy-Be Hell-ville ny alin'ny 01 novambra teo.
Mpiasan’ny Jirama mpikirakira ity tobim-pamokarana herinaratra ity no nahatsikaritra mpiambina iray avy amin’ny orinasa EMFPRO, nivimbina « jerrican » mavo feno gazoala, tokony ho tamin’ny 9 ora alina.Nampandre ny mpitantana ny Jirama any an-toerana ity mpiara-miasa ity ka napetraka ny velam-pandrika niaraka tamin’ny zandarimaria hahatrarana ireo tontakely. Tamin’ny roa ora maraina vao raikitra ny fifanenjehana ka tafatsoaka ny mpiambina iray avy amin’ny orinasa EMFPRO, izay misahana ny fiambenana.
Olona efatra kosa no notanana any amin’ny zandarimaria amin'izao fotoana izao ka mpiasan’ny Jirama ny iray, mpiasan’ny orinasa Henri Fraise ny iray, mpiambina avy amin’ny EMFPRO ny iray ary mpiambina karamain'ny Jirama ny iray. Olona telo hafa ihany koa no ahiana ho niray antoka tamin'izao halatra gazoala tao amin'nyJirama Nosy-Be izao ka hametrahan'ny mpitantana any an-toerana fitoriana.